Ankadifotsy, Ambodifilao… : nesorina ireo 4-Mi mandoto tanàna | NewsMada
Ankadifotsy, Ambodifilao… : nesorina ireo 4-Mi mandoto tanàna
Par Taratra sur 16/11/2017
Anisan’ny mpandoto sy mpanakorontana ary miteraka tsy fandriampahalemana eny anivon’ny fiarahamonina ny fisian’ireo 4-Mi izay mitoby etsy sy eroa. Nahavoaray fitarainana avy amin’ny fokontany Ankadifotsy, Ambodifilao, Analakely… ny kaominina Antananarivo Renivohitra ka nanao fidinana ifotony teny an-toerana mba hijery ny zava-misy.
Araka ny nambaran’ny tompon’andraikitra avy eo anivon’ny fari-piadidiana ny tanànan’Antananarivo Renivohitra fa voararan’ny lalàna ny matory an-dalambe sy manao ny maloto eny rehetra eny.
Nentanin’ireo ekipa avy ao amin’ny sampandraharaha misahana ny asa sosialy na ny Das ireo mpatory an-dalana ireo mba hamonjy ny toerana voatokana ho azy ireo. Tonga teny an-toerana nanampy ireo ekipan’ny Das ihany koa ny polisy monisipaly tamin’ny fanalana ireo 4-Mi sy ny fanadiovana ireo toerana izay tena hita fa maloto.
Naneho ny fahafaham-pony sy ny fisaorana ny ekipa nanadio teny ireo nanao fitarainana teny anivon’ny Das. Nilaza ny tompon’andraikitra fa ilaina koa ny fiaraha-miasa amin’ireo nanao ny fitarainana mba tsy hiverenan’ireo 4-Mi eo amin’ny toerana izay nanesorana azy intsony.